XOG: Madaxweyne Farmaajo oo culeys siyaasadeed kala kulmaya Waxgarad & Siyaasiyiin caan ah | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Madaxweyne Farmaajo oo culeys siyaasadeed kala kulmaya Waxgarad & Siyaasiyiin caan...
XOG: Madaxweyne Farmaajo oo culeys siyaasadeed kala kulmaya Waxgarad & Siyaasiyiin caan ah
Wararka aan ka heleyno Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku waramaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu culeys siyaasadeed oo aad u daran uu kala kulmayo Siyaasiyiin iyo Waxgaradka qaar ka mid ah Beelaha waa weyn ee Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa dadaal ugu jira qancinta Beelaha Soomaaliyeed oo iyagu ku dhagan Shaqsiyaad lala damacsan yahay xil ka qaadis kuwaa oo lagu eedeeyay Isdabamarin iyo Musuq.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay isku shaandheyn ku sameyso qaar ka mid ah Golaha Wasiiradda, iyadoo Ra’iisul wasaare Kheyre uu Wasiiradda Xilalka laga qaadayo ku eedeeyay Wax isdaba marin, Maamul xumo iyo Waxqabad la’aan.
Xafiiska Madaxweynaha ayaa waxaa buux dhaafiyay Odayaal dhaqmeedyo u doodaaya shaqsiyaadka lala damacsan yahay xil ka qaadista kuwaa oo Madaxweynaha laga dhaadhicinaayo inay yihiin kuwo ka caafimaad qaba Musuqa iyo waxqabad la’aan.
Madaxweynaha oo horay u gaaray go’aan ku aadan la dagaalanka shaqsiyaadka uu ka degi la’ yahay dalka ayaa iminka u muuqanaaya mid la kulmaaya caqabado dhanka Odayaasha ah, waxaana suuragal ah in Madaxweynaha uu dib ula laabto qorshooyinkiisa ku aadan la dagaalanka kuwa ku caanbaxay Musuqa.
Sidoo kale waxaa jira Warar sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo inuu isbedel ku sameeyo Shaqsiyaad ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo ay muuqato Madaxda Dalka inay doonayaan Isbedel dhinacyo badan inay ku sameeyaan Hay’addaha Dowlada.